'The Incredibles 2' ရဲ့ Cast နဲ့ Character တွေကိုထုတ်ဖော်ပြသလိုက်ပြီ - MoviesFan
‘The Incredibles 2’ ရဲ့ Cast နဲ့ Character တွေကိုထုတ်ဖော်ပြသလိုက်ပြီ
ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကျော်ကြာ.. အတိအကျပြောရရင် ၁၄ နှစ်ကျော်ကြာစောင့်ဆိုင်းခဲ့ရတဲ့ Pixar ရဲ့ကာတွန်းကားလေး The Incredibles ရဲ့အဆက်က တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ပီပီပြင်ပြင်ရုပ်လုံးပေါ်လာပါပြီ။ ဒီနေ့မှာပဲ Disney/Pixar က Incredibles2မှာပါဝင်မယ့်ဇာတ်ကောင်တွေနဲ့ အသံသရုပ်ဆောင်တွေကို ထုတ်ဖော်ကြေညာလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။
ဒီဇာတ်ကားဟာ ပထမဇာတ်ကားပြီးသွားတဲ့နေရာကနေ ဇာတ်လမ်းဆက်မှာဖြစ်ပြီး ဒီတစ်ကြိမ်မှာတော့ ဇနီးသည်ဖြစ်သူ Helen Parr/Elastigirl က အဓိကနေရာကပါဝင်မှာဖြစ်ကာ ခင်ပွန်းဖြစ်သူ Bob Parr/Mr. Incredible က ကလေးထိန်းရင်း နေ့စဉ်မိသားစုဘဝကို ဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလိုနေထိုင်ရာကနေ Super Villain ကြီးတွေပေါ်လာတော့ Incredibles တွေအနေနဲ့ သူတို့ရဲ့စွမ်းအားတွေကိုအသုံးချပြီး နှိမ်နင်းကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီဇာတ်ကားမှာ ပထမဇာတ်ကားတုန်းက အဓိကဇာတ်ကောင်တွေတော်တော်များများ ပြန်လည်ပါဝင်လာသလို ဇာတ်ကောင်အသစ်တွေလည်းပါဝင်လာတာကိုတွေ့ရမှာပါ။ Mr. Incredible တို့မိသားစု၊ Lucius Best/Frozone ၊ Edna Mode တို့ကတော့ နဂိုကတည်းကပါဝင်တဲ့ဇာတ်ကောင်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။ Winston Deavor (Bob Odenkirk) ကတော့ ဆက်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်တစ်ဦးဖြစ်ပြီးတော့ Superhero တွေကိုနှစ်သက်အားပေးသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ Evelyn Deavor (Catherine Keener) ကတော့ Winston ရဲ့ညီမဖြစ်ပြီးတော့ နည်းပညာဂုရုကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ Voyd (Sophia Bush) ကတော့ Elastigirl ကိုအားကျသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးတော့ အရာဝတ္ထုတွေကို ဖျောက်နိုင်ဖော်နိုင်တဲ့စွမ်းအားပိုင်ရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။
ကဲ.. ပါဝင်မယ့်ဇာတ်ကောင်တွေတော့သိရပါပြီ.. Villain ကဘယ်သူများဖြစ်မလဲ.. အဲဒါကတော့ Pixar ရဲ့ post မှာဖော်ပြထားတဲ့ပုံတွေမှာသွားရောက်ကြည့်ရှုပြီး ကြိုတင်ခန့်မှန်းထားနိုင်ပါတယ်။
Previous Post: ကလေးတွေနဲ့ လူကြီးလူငယ်တွေကြားမှာ Thor လို့လူသိများတဲ့ Chris Hemsworth ရဲ့ ဇာတ်ကားကောင်းများ
Next Post: ၂၀၁၇ ရဲ့အညံ့ဆုံးမင်းသမီးဆုအတွက် ဆန်ခါတင်ရွေးချယ်ခံလိုက်ရတဲ့ Emma Watson